I-US Tourist Visa Online, I-Visa Yase-US Esemthethweni, Isigunyazo Sokuvakasha sase-USA
Ukufaneleka kwe-VISA yase-US
I-US Visa Online (Uhlelo Lwe-elekthronikhi Lokugunyazwa Kokuhamba)
I-America Visa Online iyisigunyazo sokuvakasha esidingekayo kubahambi abavakashela e-United States ngezinjongo zebhizinisi, ezokuvakasha noma ezokuthutha. Le nqubo eku-inthanethi Yohlelo Lwe-elekthronikhi Lokugunyazwa Kokuvakasha lwase-United States yasetshenziswa kusukela ngoJanuwari 2009 yi-US Customs and Border Protection, ngenhloso yokuvumela noma yiziphi izihambi ezifanelekayo zesikhathi esizayo ukuthi zifake isicelo se-Electronic Visa ukuya e-United States.
I-US Visa Online
I-America Visa Online iyisigunyazo sokuvakasha esidingekayo kubahambi abavakashela e-United States ngezinjongo zebhizinisi, ezokuvakasha noma ezokuthutha. Le nqubo eku-inthanethi Yesistimu Ye-elekthronikhi Yokugunyazwa Kokuvakasha yase-United States yasetshenziswa kusukela ngoJanuwari 2009 yi-US Customs and Border Protection.
1. Gcwalisa isicelo se-Visa sase-US
2. Thola i-Visa yase-US nge-imeyili
3. Faka i-United States
Iyini i-America Visa Online (e-Visa)?
I-America Visa Online (i-eVisa) iyindlela ekhethekile yokufaka isicelo se-visa yokungena e-United States. Ibizwa nge-US Visa Online (eVisa) ngoba abantu akudingekile ukuba baphume bayofaka isicelo se-visa ehhovisi lenxusa laseMelika, noma bathumele iposi noma bathumele ipasipoti yabo, noma bavakashele noma yisiphi isikhulu sikahulumeni.
Kuyidokhumenti esemthethweni ekhishwe yi-US Customs and Border Protection (CBP) eyenza izakhamizi kanye nezizwe ezivela ezweni. Amazwe we-Visa Waiver ukungena e-United States kwe- ezokuvakasha, ezokuhamba noma zebhizinisi. I-Electronic USA Visa (eVisa) iyisibopho sokugunyazwa kohambo kubahambi abavakashela e-United States ngoLwandle noma ngoMoya ukuvakasha okungaphansi kwezinsuku ezingama-90.
Kugunyazwe nge-elekthronikhi ukungena e-United States njenge-Visa Yezivakashi kodwa ngenqubo nezinyathelo ezilula. Zonke izinyathelo zingenziwa ku-inthanethi, okonga isikhathi, umzamo kanye nemali. Uhulumeni wase-US ukwenze kwaba lula futhi lolu hlobo lwe-eVisa luyisikhuthazo kwabahamba ngezokuthutha, izivakashi nabamabhizinisi.
I-American Visa Online isebenza iminyaka emi-2 (emibili) kusukela ngosuku lokukhishwa kwayo noma kuze kube yilapho iphasiphothi yakho iphelelwa yisikhathi, noma yikuphi okuza kuqala. Isikhathi sokuqinisekisa se-Electronic Visa yakho sihlukile kunesikhathi sokuhlala. Ngenkathi i-e-Visa yase-US isebenza iminyaka emi-2, wena ubude besikhathi abungeqi ezinsukwini ezingama-90. Ungangena e-United States nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwesikhathi sokusebenza.
Isikhulu sase-United States CBP (Customs and Border Protection).
Ngingasifaka kuphi isicelo se-Visa Online yase-US (eVisa)?
Abafakizicelo bangafaka isicelo ku-inthanethi ku- Ifomu lesicelo se-Visa lase-US.
Kunamazwe amaningi emhlabeni jikelele ahlinzeka nge-eVisa, i-USA ingelinye lawo. Kufanele uvela ku-a I-Visa Waiver Country ukuze ukwazi ukuthenga i-America Visa Online (eVisa).
Amazwe amaningi ahlala engezwa ohlwini lwamazwe angazuza inzuzo yokuthola i-Electronic US Visa ebuye yaziwe nge-eVisa. Uhulumeni wase-US ibheka lokhu njengendlela ekhethwayo yokufaka isicelo sokuvakashela e-US okungaphansi kwezinsuku ezingama-90.
Izikhulu zezokufika kwa-CBP (Customs and Border Protection) zizobuyekeza isicelo sakho, futhi uma sesivunyiwe, zizokuthumelela i-imeyili ethi i-Visa Online yakho yase-US isigunyaziwe. Uma lokhu sekwenziwe, okudingekayo nje ukuya esikhumulweni sezindiza. Awudingi isigxivizo kuphasiphothi yakho noma uthumele/uthumele ipasipoti yakho ehhovisi lenxusa. Ungakwazi ukubamba indiza noma umkhumbi wokuhamba ngomkhumbi. Ukuze uphephe, ungathatha iphrinta ye-eVisa yase-US ethunyelwe kuwe nge-imeyili noma ungagcina ikhophi elithambile ocingweni / kuthebhulethi yakho.
Ukufaka isicelo se-America Visa Online
Yonke le nqubo isekelwe kuwebhu, kusukela ekufakeni isicelo, ekukhokheni, nasekuthumeleni ukuya ekwazisweni ngomphumela wesicelo. Umfakisicelo kuyodingeka agcwalise ifomu Ifomu lesicelo se-Visa lase-US nemininingwane efanele, okuhlanganisa imininingwane yokuxhumana, imininingwane yokuqashwa, imininingwane yepasipoti, nolunye ulwazi lwangemuva olufana nerekhodi lezempilo kanye nobugebengu.
Bonke abantu abaya e-United States, kungakhathalekile ukuthi badala kangakanani, kuzofanele bagcwalise leli fomu. Uma sesigcwalisiwe, umfakisicelo kuyodingeka enze inkokhelo Yesicelo Se-Visa sase-US esebenzisa ikhadi lesikweletu noma lasebhange noma i-akhawunti ye-PayPal bese ehambisa isicelo. Izinqumo eziningi zifinyelelwa phakathi namahora angu-48 futhi umfakisicelo uyaziswa nge-imeyili kodwa ezinye izimo zingase zithathe izinsuku ezimbalwa noma isonto ukucutshungulwa.
Kungcono kakhulu ukufaka isicelo se-Visa Online yase-US ngokushesha nje lapho usuqedele izinhlelo zakho zokuhamba futhi kungakedluli Amahora angama-72 ngaphambi kokungena kwakho okuhleliwe e-United States . Uzokwaziswa ngesinqumo sokugcina nge-imeyili futhi uma kwenzeka isicelo sakho singagunyazwa ungase uzame ukufaka isicelo se-Visa yase-United States ehhovisi lenxusa lase-US eliseduze nawe.
Kuzokwenzekani ngemva kokufaka imininingwane yami Yesicelo Se-Visa sase-US?
Ngemva kokufaka lonke ulwazi lwakho lomuntu siqu efomini le-Inthanethi le-Visa ye-Visa yase-US, Isikhulu se-Visa esivela kwa I-CBP (Customs and Border Protection) izosebenzisa lolu lwazi kanye nezinyathelo zokuphepha ezweni lakini kanye nangemininingwane yolwazi ye-Interpol ukuze inqume ukuthi umfakisicelo angayithola yini i-Visa Online yase-US noma cha. Abafake izicelo abangama-99.8% bavunyelwe, ingxenye encane kuphela yabantu abangu-0.2% abangeke bavunyelwe ukungena ezweni le-eVisa okufanele bafake isicelo senqubo ye-visa esekelwe ephepheni evamile ngeNxusa LaseMelika. Laba bantu abafanelekile ukuthola i-America Visa Online (eVisa). Nokho, banenketho yokuphinda bafake isicelo ngenxusa laseMelika.
Funda kabanzi ku- Ngemva kokufaka isicelo se-US Visa Online: Izinyathelo ezilandelayo
Izinjongo ze-America Visa Online
I-Visa Ye-elekthronikhi yase-US inezinhlobo ezine, noma ngamanye amazwi, ungafaka isicelo se-America Visa Online uma inhloso yokuvakasha kwakho ezweni ingokukodwa kokulandelayo:
Ukuhamba noma ukumiswa: Uma uhlela kuphela ukubamba indiza exhumayo evela e-US futhi ungafuni ukungena e-US le Visa Online yase-US (i-eVisa) ikulungele.
Imisebenzi yabavakashi: Lolu hlobo lwe-US Visa Online (eVisa) lufanele labo abafisa ukungena e-United States ukuze bazijabulise, babone.
Business: Uma uhlela uhambo olufushane olusuka e-Singapore, Thailand, India njll. ukuze ube nengxoxo yezentengiso e-United States lapho i-US Visa Online (eVisa) izokuvumela ukuthi ungene e-United States izinsuku ezingafika kwezingu-90.
Sebenza futhi Uvakashele Umndeni: Uma uhlela ukuvakashela abangani noma izihlobo ezihlala e-United States esezivele ziku-visa/indawo yokuhlala evumelekile, i-eVisa izovumela ukungena kuze kufike ezinsukwini ezingama-90 Kulabo abahlela ukuhlala isikhathi eside njengonyaka wonke e-US thina batusa ukuthi ucabangele i-Visa yase-US evela eNxusa.
Ubani ongafaka isicelo se-America Visa Online?
Abaphathi bepasipoti bezizwe ezilandelayo abafuna ukungena e-United States ngenhloso yezokuvakasha, ezokuthutha noma zebhizinisi kumele bafake isicelo se- I-US Visa Online futhi bakhululiwe ekutholeni i-Visa yesiko / yephepha yokuhambela amazwe ase-Unites.
Izakhamizi zaseCanada badinga kuphela amaPasipoti abo aseCanada ukuze baye e-United States. Izakhamizi Zaphakade ZaseCanada, nokho, kungase kudingeke ukuthi bafake isicelo se-Visa Online yase-US ngaphandle uma sebeyisakhamuzi selinye lamazwe angezansi.
Yiziphi Izidingo Zokufaneleka eziphelele ze-Visa Online yase-US (eVisa)?
Izidingo zilula kakhulu. Kulindeleke ukuthi uhlangabezane nezidingo ezilandelayo.
Unepasipoti evumelekile evela ezweni elinikeza i-US Visa Online (eVisa).
Inhloso yohambo lwakho kumele kube okukodwa kokuthathu, okokuthutha/ukuvakasha/okuhlobene nebhizinisi (isb, imihlangano yebhizinisi).
Unepasipoti evumelekile evela ezweni elinikeza i-US Visa Online (eVisa) noma i-Visa lapho ufika izakhamuzi zaseMelika.
Inhloso yohambo lwakho kumele kube kokuthathu, ezokuthutha/ ezokuvakasha/okuhlobene nebhizinisi (isb, imihlangano yebhizinisi).
Kufanele ube ne-id ye-imeyili evumelekile ukuze uthole i-eVisa.
Kufanele ube nelinye lamakhadi edebhithi / esikweletu noma i-akhawunti ye-Paypal.
Ulwazi luyadingeka ekufakeni isicelo se-Visa yase-US
Abafakizicelo base-US Visa Online bazodinga ukuhlinzeka ngolwazi olulandelayo ngesikhathi sokugcwalisa ku-inthanethi Ifomu lesicelo se-Visa lase-US:
Ngaphambi kokufaka isicelo se-USA Visa Isicelo
Abahambi abahlose ukufaka isicelo se-Visa Online yase-US kumele bafeze le mibandela elandelayo:
Iphasiphothi yomfakisicelo kumele isebenze okungenani izinyanga ezintathu ngemuva kosuku lokuhamba, usuku oshiya ngalo i-United States.
Kufanele futhi kube nekhasi elingenalutho kupasipoti ukuze i-US Customs kanye ne-Border Protection Officer ikwazi ukugxisha ipasipoti yakho.
I-Visa yakho ye-Electronic yase-United States, uma ivunyiwe, izoxhunywa ne-Passport yakho esemthethweni, ngakho-ke kudingeka futhi ube ne-Passport esemthethweni, okungaba yi-Ordinary Passport, noma i-Official, Diplomatic, noma i-Service Passport, yonke ikhishwe amazwe afanelekile.
Umfakisicelo uzothola i-USA Visa Online nge-imeyili, ngakho-ke i-ID ye-imeyili evumelekile iyadingeka ukuze uthole i-US Visa Online. Ifomu lingagcwaliswa izivakashi ezihlose ukufika ngokuchofoza lapha Ifomu lesicelo se-Visa lase-US.
Kusukela Ifomu lesicelo se-Visa lase-USA itholakala kuphela ku-inthanethi, ngaphandle kokulingana nephepha, kudingeka ikhadi lesikweletu / lasebhange elivumelekile noma i-akhawunti ye-PayPal.
Isicelo se-America Visa Online sithatha isikhathi esingakanani ukusetshenzwa
Kuyancomeka ukuthi ufake isicelo se-America Visa Online okungenani amahora angama-72 ngaphambi kokuthi uhlele ukungena ezweni.
Ukuba semthethweni kwe-USA Visa Online
I-USA Visa Online isebenza isikhathi esiyiminyaka emibili (2) kusukela ngosuku eyakhishwa ngalo noma ngaphansi uma iPhasipoti exhunywe kulo ngekhompiyutha iphelelwa yisikhathi ngaphambi kweminyaka emibili (2). I-Electornic Visa ikuvumela ukuthi uhlale e-United States ubuningi bezinsuku ezingama-90 ngasikhathi kepha ungayisebenzisela ukuvakashela izwe kaninginingi esikhathini sokusebenza kwalo. Kodwa-ke, isikhathi ozovunyelwa ukuhlala kuso isikhathi esithile sizonqunywa yizikhulu zomngcele ngokuya ngenhloso yakho yokuvakasha futhi zizofakwa isitembu ku-Passport yakho.
Ukungena e-United States
I-Electronic Visa yase-United States iyadingeka ukuze ukwazi ukugibela indiza eya e-United States njengoba ngaphandle kwayo awukwazi ukungena kunoma iyiphi indiza eya e-US. Nokho, Amasiko Wokuvikela Namasiko Wase-US (i-CBP) noma izikhulu zasemngceleni wase-US zingakwenqabela ukuthi ungene esikhumulweni sezindiza ngisho noma ungumnikazi ogunyaziwe we-Electronic US Visa
uma ngesikhathi sokungena ungenayo yonke imibhalo yakho, njengephasiphothi yakho, ukuze ihlole abaphathi bomngcele
uma unomlando wobugebengu / wamaphekula wangaphambilini noma izingqinamba zangaphambilini zokufuduka
Uma usuwalungiselele wonke amadokhumenti adingekayo e-America Visa Online futhi uhlangabezana nazo zonke izimo zokufaneleka ze-Electronic Visa yase-United States, lapho-ke kufanele ukwazi ukufaka isicelo ku-inthanethi sohlelo lwe-Visa yase-US olufomu layo lilula futhi liqondile. Uma udinga izincazelo funda Inqubo Yesicelo Se-Visa Yase-US umhlahlandlela noma thintana nosizo lwethu ukwesekwa nokuholwa.
Amadokhumenti abanikazi be-Visa Online yase-US abangase babuzwe emngceleni wase-United States
Umfakisicelo angase acelwe ukuthi anikeze ubufakazi bokuthi angakwazi ukuzondla ngokwezimali futhi azisekele ngesikhathi ehlala e-United States.
Umfakisicelo angase adingeke ukuthi abonise ukuthi uhlose ukuhamba e-United States ngemva kokuphela kwenjongo yohambo lapho isicelo se-Visa Online yase-US isiphelile.
Uma umfakisicelo engenalo ithikithi lokuqhubekela phambili, anganikeza ubufakazi bezimali namandla okuthenga ithikithi esikhathini esizayo.
EZINYE ZEZINHLE EZIBALULEKE KAKHULU ZOKUFAKA I-VISA YAKHO YASE-US KU-INTANETHI
Ukutholwa kwe-imeyili kwe-Visa yakho yase-US uma kwenzeka ulahlekelwa.